कति हुन्छ मिस वर्ल्डको कमाइ ? यस्ता छन् ताज जितेपछि हुने फाइदा - Internet Khabar
कति हुन्छ मिस वर्ल्डको कमाइ ? यस्ता छन् ताज जितेपछि हुने फाइदा
November 27, 2017 Internet Khabar Desk
एजेन्सी। संसारकै सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य प्रतियोगिता मानिने ‘मिस वर्ल्ड’ प्रतियोगिता हालै सम्पन्न भएको छ । यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधि भारतकी मानुषी छिल्लरले जितेकी छिन् । ताज जितेसँगै मानुषीको सबैतिर चर्चा छ । तर के तपाइँलाई थाहा छ यो उपाधि जितेपछि कति पुरस्कार पाइन्छ ?
मिस वर्ल्डको ताज जित्नको लागि संसारभरका युवतीहरु हरेक वर्ष प्रयत्न गर्छन् । यो ताज पाउने युवतीलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर मानिन्छ । यसका साथै उनीमाथि धनको वर्षा हुन सुरु हुन्छ । प्रतियोगिता जित्नेको लागि सबैभन्दा खास चीज यसको ताज हो । यो ताजमा हीरा र अन्य बहुमूल्य रत्नहरु जडिएका हुन्छन् । यसको मूल्य ५ देखि ८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन्छ ।
यसबाहेक मिस वर्ल्डले करिब १६ करोड नेपाली रुपैयाँजति नगद पुरस्कार पाउँछिन् । मिस वल्र्ड एक वर्षको लागि संसारभर कहीँपनि फ्रिमा घुम्न सक्छिन् । मिस वर्ल्डलाई ठूला ठूला ब्राण्डको स्पोन्सरसिप हुन्छ । अर्थात मिस वर्ल्डले ती ब्राण्डका सामान निःशुल्क उपयोग गर्न पाउँछिन् । मिस वर्ल्ड बन्नासाथ उनीहरुले कैयौं एड फिल्म पाउँछन् ।
माउन्ट आगुंगमा ज्वालामुखी फुट्ने संकेट देखिएपछि ‘रेड वार्निङ’ जारी
तपाइँ उमेर भन्दा धेरै बाँच्न चाहनुहुन्छ? अपनाउनुस् यो सजिलो विधि
भाडामा जग्गा, काठको टहरामा वडापालिका
मकै पोलेर बेचेरै भरतपुरमा घर
सन् २०२० का लागि डिभी खुल्यो, यसरी भर्नुस डिभी (तरिकासहित)
दशैँको लागि जहाजको टिकट सकियो, अतिरिक्त उडान थप्ने तयारी